साहित्य मा Superfluous मानिस। रूसी क्लासिक
साहित्य - धेरै एक विज्ञान, अरू सबैलाई जस्तै, केवल थप रोचक छ। यो पनि एक ठाउँ फरक वर्गीकरण छ। सबैलाई "Turgenev गरेको केटी" को छवि परिचित छ, तर अझै पनि मा रूसी साहित्य superfluous मानिसको सबैभन्दा लोकप्रिय तरिका हो। यसलाई अझ राम्रो उहाँलाई चिन्न समय छ।
जो एक पटक एक मानिस थिए?
साहित्य मा Superfluous मानिस - एक छ साहित्यिक वर्ण, अक्सर रूसी कलाकार 1840-1850-एँ को कार्यहरूमा पाइएको। यस्तो व्यक्ति प्रतिभाशाली छ र मानव जाति एक योग्य प्रतिनिधि हो। कारण परिस्थिति को एक नम्बर यसलाई रूस मा यसको पूर्ण क्षमता महसुस गर्न सक्दैन।
मा रूसी साहित्य Superfluous मानिस अक्सर समाज को माथिल्लो कक्षा पर्छ। तथापि, उहाँले केही तरिकामा rabble मानिन्छ जो आचरण र प्रशाशनिक तन्त्र, अलग। उहाँको वरिपरि मानिसहरू Condemning र आफ्नो क्षमता महसुस गर्न कुनै वास्तविक मौका भएको यस्तो व्यक्ति idleness, चिन्तन वा पर्वहरू सबै आफ्नो खाली समय बिताउनुहुन्छ। निस्सन्देह, एक व्यक्ति, उच्च आदर्श र विचार को पूर्ण लागि जीवनको यो बाटो, घातक, यो एक विनाशकारी पट्टाइ मा उहाँलाई फेंकता किनभने छ। यस कारण, वर्ण पछि यो बर्बाद जो, वा तरिका आफ्नो blokluyu खैरो जीवन विविधता गर्न slightest provocation मा एक Duel गर्न चुनौती, जुवा चासो लिन्छ।
को superfluous मानिसको मुख्य विशेषताहरु - छ:
शब्द र कार्यहरू आफ्नो लागि जिम्मेवारी लिन नसक्नुको;
समाजमा निष्क्रिय भूमिका;
लामो कार्य र विचार penchant।
तसर्थ, हामी वजन भएको मान्छे निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं - यो आफ्नो महत्व, क्षमता र बौद्धिक क्षमता प्रमाणित गर्न धेरै amorphous र पहल कमी, तर उत्सुक रहेको। देर XIX सताब्दी को साहित्य मा, यो छवि आंशिक गाया र विस्तृत छलफल भएको थियो।
साहित्य मा अतिरिक्त मान्छे को तस्बिरहरू 1850 Turgenev प्रकाशित पछि देखा पर्न थाले "एक Superfluous मानिसको डायरी।" निराश र निष्क्रिय रूसी nobleman - - परिचित अवधारणा कस्नु यसलाई मुख्य पात्र लागि हो। धेरै छिटो, यो छवि खुसीसाथ आफ्नो सारा काम समर्पित गर्ने रूसी लेखकहरूले मा वोग मा आए। तर आफ्नो काम यो तपाईं आश्चर्य बनाउँछ, हदसम्म आत्मकथात्मक थियो।
साहित्य मा एक Superfluous मानिसको छवि दृढ Evgeniem Oneginym लागि स्थापित भएको थियो। पहिले र उहाँलाई पछि आए सबै, एक वर्ण सबै विशिष्ट सुविधाहरू त सही र जीवन्त व्यक्त गर्दैन। उहाँले कसरी थियो? Onegin Aleksandra Pushkina आफ्नो समय को एक योग्य प्रतिनिधि, उत्कृष्ट को पनि एक हो। उहाँले धेरै, बुद्धिमान स्मार्ट र Insightful छ। साथै, यो चासो को एक विस्तृत श्रृंखला (खगोल विज्ञान, इतिहास, चिकित्सा, दर्शन) छ। कुनै पनि विषयमा उहाँले सजिलै, जवाफ पाता र स्वाभाविक सानो कुरा समर्थन। धेरै रोचक र सूचनात्मक पढ्ने यूजीन नैतिकता, धर्म वा विज्ञान बारेमा लीना संग संवादलाई। नायक एक ट्रेस पछि छोड्ने, गहन कुरा गर्न पनि डराउने इच्छा छ। यूजीन, उदाहरणका लागि, किसान जीवन सजिलो बनाउन एक सानो प्रयास। दुर्भाग्यवश, यो सबै किनभने यो भन्दा, उहाँले अनमोल समय मार्फत, मूर्खता को एक किसिम बनाउन जलाए, सबै जीवन को पृष्ठभूमिमा हराएको थियो कि केवल एक सानो कुरा थियो। वर्ण मा ठूलो जमाउँछ पीटर्सबर्ग - SPOILED र छाडा। यी मानिसहरू वृद्धि र व्यक्तित्व यूजीन परिपक्व बीचमा छ। उहाँले केहि प्रयास गर्न उहाँले चाहनुहुन्छ गर्दैन र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले कसैले प्रेम गर्न सक्दैन बुझ्छ। यो जागरूकता थप Onegin depresses। यो बावजुद, पुस्तक भर, उहाँले परिवर्तन भयो। मुख्य पात्र त्यहाँ आध्यात्मिक पुनरुद्धार लागि आशा छ किनभने पुस्तक, सकारात्मक टिप्पणी समाप्त हुन्छ।
विषय साहित्य मा superfluous मानिस धेरै साधारण छ। सबै भन्दा लोकप्रिय अतिरिक्त मान्छे - यो छ यूजीन Onegin (ए एस Pushkin), Pechorin (एम Lermontov) र Chatsky (ए Griboyedov)। भनिन्छ नायक romanticism को युग मा बस्ने बाइरन, को वर्ण थप Originate। अतिरिक्त चरित्र विकास रूपमा "कसले दोष छ" यस्तो काम, साथै प्रारम्भिक काम पहिले नै Turgenev (Chulkaturin Rudin, Lavretsky) नाम मा देखिन्छ।
वास्तविकता मा रोमान्स
साहित्य मा Superfluous मानिस - उहाँले जो छ? तपाईंलाई थाहा रूप मा, बाइक हामी मात्र फरक कोणबाट यो हेर्न पर्दैन, reinvent गर्न आवश्यक छैन। वजन भएको मान्छे - यो लामो हामीलाई परिचित वास्तविकता को ऐना को लेखक मानिन्छ जो रोमान्टिक वर्ण भएको छ। लेखक को काम मा overboard समाज जीवन हालियो छ जो आफ्नो चरित्र, प्रशंसा छैन। उहाँले अब मानव प्रकृति को टकराव र परिस्थिति को एक किसिम वर्णन गर्दछ। कारण लेखक अलगाव गर्ने सम्भावित कारणहरू मा हेर्न व्यवस्थापन गर्न अतिरिक्त मान्छे को कोटीमा, तिनीहरूलाई विश्लेषण र बाहिर एक तरिका खोज्छन्। धेरै ध्यान यी मानिसहरू को मनोविज्ञान, मन, भावना र व्यवहार को आफ्नो राज्य भुक्तान छ। यो सबै वर्णन, लेखक अब केही पाठ नैतिकता व्यक्त गर्न, केही सिकाउन ल्याउन प्रयास गर्नुहोस्। Instructive टोन बाटो विश्लेषण र विचार को लागि खुला छ, हराएको छ।
कामहरू को विशेषता सुविधाहरू
को 19 औं शताब्दीको साहित्य मा अतिरिक्त मान्छे मानव प्राण, यसको चिन्ता र भरिएको गर्न चासो लेखकहरूले आफूलाई कारण थिए। भित्री संसार बहुमुखी शिक्षित व्यक्ति एक अध्ययन रूसी यथार्थवाद सबै काम एउटा महत्त्वपूर्ण सुविधा छ। लामो समय को लागि साहित्य मा Superfluous मानिस लेखकहरूले र आलोचकहरु को दैनिक जीवन मा प्रवेश। यो अवधारणा सामाजिक वैज्ञानिकहरूले र साहित्यिक वातावरण अन्य व्यक्तित्व लागि अध्ययन र प्रतिबिम्ब विषयको भयो।
को 19 औं शताब्दीको साहित्य मा अतिरिक्त मान्छे को कारण ले लेखकहरूले आफूलाई समस्याको मा निहित छन्। कागज मा तथ्यलाई कुरा प्रतिबिम्बित गर्न, यो भित्र थियो आवश्यक छ। सिर्जना वा बाहिर असम्भव छ केही साथ आउँछन्। साहित्यिक निर्माताहरू आफूलाई आफ्नो नायक गर्न श्रेय छन् ती समस्या र torments पूर्ण थिए। सायद तिनीहरू सबै छैन त स्पष्ट प्रकट, तर आफूलाई मा बुझ्न सुरु, तिनीहरूले चरमोत्कर्षलाई एक राज्य आफ्नो वर्ण ल्याउन र अतिशयोक्ति एउटा तरिका पत्ता लगाउन सक्षम थिए।
केही हदसम्म प्रत्येक व्यक्ति "superfluous।" छ प्रत्येक कम्तिमा कहिलेकाहीं हुन आफूलाई महसुस, त्यसैले यो धेरै को लागि समस्या छ। किन अतिरिक्त मान्छे को torments वर्णन साहित्य, एक क्लासिक भएको छ भन्ने छ। यो विषय साँच्चै मांग मा सधैं गर्दैन हुनेछ? यस क्षेत्रमा साहित्य विकास नयाँ लेखक सामाजिक स्तर र रूपरेखा मा फिट नगर्ने मान्छे वर्णन भन्ने तथ्यलाई कारण छ। यी हरेक वर्ष थप र थप, र प्रत्येक ध्यान र विचारशील लेखक को लागि एक सानो ब्रह्माण्ड थियो।
यो साहित्य मा वजन भएको मान्छे कारण वास्तवमा प्रदर्शन ठूलो घटना भनेर खडा भएको छ भनेर बुझ्न आवश्यक पनि छ। धनी शासकहरुले मालिक आफूलाई कब्जा गर्न के थाहा थिएन। तिनीहरूले idleness र indolence आत्मा हुर्केका छन् जो बच्चाहरु जन्म दिन। तिनीहरूले कुनै लक्ष्य र आकांक्षाओं छ। एक व्यक्ति यस्तो वातावरणमा बढ्छ, यो मदत तर संसारको आफ्नो भविष्य चित्र र जीवन नै प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन। कहिलेकाहीं अतिरिक्त मानिस साँच्चै अद्भुत र अद्वितीय व्यक्तित्व को एक प्रतिबिम्ब थियो, तर सबै को सबै भन्दा उहाँले अर्डर साहित्य मा आसपास मा पनि demonstrative को संकेत थियो जो एक पुरा मान्छे को, समूह द्वारा चाहनुभएको।
साहित्य मा Superfluous मानिस तिनीहरूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दुखाइ र समस्या धेरै ल्याउँछ भन्ने तथ्यलाई द्वारा विशेषता छ। अक्सर यो नायक को साँचो अर्थमा संग imbued छन् जो महिलाहरु सम्बन्धित छ। मुख्य समस्या तिनीहरूले छन् जो संसारको सामाजिक र कार्यात्मक संरचना मा फिट गर्न असमर्थ र अनावश्यक छन् कि अतिरिक्त मान्छे मा निहित। यी वर्ण लेखकहरूले र भाग-समय अधिकारीहरु (ऐ Goncharov, ए Pisemsky) देखा छ। पुस्तक LVA Tolstogo मा "युद्ध र शान्ति" आला superfluous मानिस प्रति Bezuhov लामो समय लाग्छ। यो उपस्थित थियो जसले सबै दुष्ट र छल, repelled रूपमा आफ्नो नायक, जीवन को डर छ। बरु, उहाँले चित्रहरु खरीद गरिएको छ एक वास्तविक जीवन, र पूर्ण यसलाई मा समावेश बस्दा, म धेरै पिए र हिड्ने थियो, र पुस्तकहरू संसारमा होमियो।
अतिरिक्त मान्छे सामान्यतया धेरै प्रतिभाशाली र बौद्धिक छन्, तर विभिन्न कारण तिनीहरूले समाजमा आफूलाई व्यक्त गर्न सक्दैन। यो सबै जुवा घरहरू र अन्य शंकास्पद ठाउँमा तिनीहरूलाई ड्राइव एक निष्क्रिय निराशा गर्न जान्छ। आत्महत्या प्रतिबद्ध वा अन्य अवस्थामा सिकार बन्न, तिनीहरूले एक Duel मृत्यु छन्: यस्तो व्यक्ति को अक्सर जीवन धेरै दुःखद टिप्पणी मा समाप्त भएको छ।
उपयोगी र instructive जानकारी को एक विशाल गोदाम छ - लेखको परिणाम संक्षेप, म रूसी क्लासिक भन्न चाहन्छु। आफूलाई र हामीलाई थोडा थप वरिपरिको विश्व थाहा इच्छा जो कोहीले, बस शब्द को रूसी मालिकको को अद्वितीय काम थाह प्राप्त छ।
Apes र मान्छे - समानता र मतभेद। प्रकार र आधुनिक ठूलो apes को सुविधाहरू
लिसेयुम को जिम कस्तो भिन्नता छ?
कथा "Priemysh" को लागि योजना। DN Mamin-साइबेरियन, "Priemysh": सारांश
शिक्षा: सिक्ने लक्ष्य, उद्देश्य, सिद्धान्त
अनाज बनाइएका व्यञ्जन। हाम्रो हजुरआमा को व्यञ्जनहरु, र मात्र
इटाली को क्षेत्र के हो? जनसंख्या इटाली
चरण कार्य योजना द्वारा एक चरण: घर मा एक रोबोट कसरी बनाउने
खट्टा क्रीम पाइ। व्यञ्जनहरु
पहिलो रूसी paleontologist
एक काचित पोर्सिलेन टाइल्स के हो?
Tatarstan को अद्वितीय रिजर्व: प्राकृतिक, संग्रहालय
मह मा पखेटा कसरी खाना पकाउनु?
तार fingering। तार गिटार
त्यहाँ एक मानिस र एक महिला बीचको मित्रता छ? सम्बन्ध को मनोविज्ञान
आलु सानो ट्युमर nematode: वर्णन, चोट, लडाई
तीर भाग्य Guessing। जवाफ पत्ता - या त 'हो' वा 'कुनै'।